कोरोना अपडेट: देशभर १ हजार ४ सय ७८ सङ्क्रमित थपिए, ६ जनाको मृत्यु
सोमबार, कात्तिक १, २०७८ १०:३०:४८ युनिकोड
बुधबार, असोज ६, २०७८ जनता नेपाल
काठमाडौँ । आज देशभर १ हजार ४ सय ७८ जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन् ।
११ हजार ६७ वटा नमुनाको पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्दा १ हजार २ सय ५१ जना तथा २ हजार ८ सय ६३ वटा नमुनाको एन्टीजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा २ सय २७ जना गरी जम्मा १ हजार ४ सय ७८ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा थप ५ सय ६४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
काठमाडौँमा ३ सय ५५, भक्तपुरमा ५८ र ललितपुरमा १ सय ५१ गरी जम्मा ५ सय ६४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
देशभर आज कोरोना सङ्क्रमणबाट १ हजार ६ सय ३० जना मुक्त भएका छन् । योसँगै कोरोना सङ्क्रमणबाट अहिलेसम्म ७ लाख ५५ हजार ६ सय ३० जना निको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना सङ्क्रमणबाट निको भएको दर ९५ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ ।
आज कोरोना सङ्क्रमणबाट ६ जनाको मृत्यु भएको प्रवक्ता डा. पौडेलले बताउनुभयो ।
देशभरिका होम आइसोलेसन र संस्थागत आइसोलेसनमा गरी जम्मा २१ हजार १ सय ३९ जना सक्रिय सङ्क्रमितले उपचार गराइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जसमा ३ सय ३४ जनाले आइसियु र १ सय १९ जनाले भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ६, २०७८, २०:२२:००
कोरोना भाइरस: संक्रमण मुक्त हुने दर ९६ दशमलव ८ प्रतिशत
कोरोना अपडेट: २४ घण्टामा ७६० संक्रमित थपिए,८९९ जना डिस्चार्ज, ११ जनाको मृत्यु
नेपालमा हालसम्म ८ लाख ७५ हजार ९ सय ५९ जना कोरोनाबाट संक्रमित
देशैभर १८ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहकालाई भेरोसेल खाेपको पहिलो डोज लगाउन सुरु
मंगलबार, असोज ५, २०७८ जनता नेपाल
आजदेखि ११ दिनसम्म देशैभर भेरोसेल खेपको पहिलो डोज लगाउन सुरु गरिएको छ । चीनबाट आइपुगेको ४४ लाख डोज खोप आजबाट नागरिकमा वितरण सुरु गरीने स्वास्थ्य सेवा विभाग बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा. सागर दाहालले बताउनुभयो । दोस्रो मात्रा भने कात्तिक ४ देखि १४ गतेसम्म सबै जिल्लामा दिइने उहाँले बताउनुभयो । पुरा पढ्नुहोस्
आज सरकारले चीनसँग खरीद गरेको ४४ लाख मात्रा कोभिड १९ विरुद्धको भेरोसेल खोप काठमाडौं आउँदैछ । सरकारले पछिल्लो पटक चीन सरकारसँग खरिद गरेको ६० लाख भेरोसेल खोपमध्ये १६ लाख मात्रा आएको थियो । बाँकि रहेको ४४ लाख डोज खोप आज आउन लागेको हो । पुरा पढ्नुहोस्